UThixo Ukumema Ukuba Ube Ngumhlobo Wakhe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISidama ISpanish Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseGhana Intetho Yezandla YaseMozambic Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseGuatemala Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseNew Zealand Intetho Yezandla yaseOstriya Intetho Yezandla yasePanama Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseThai Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAbkhaz IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBaoule IsiBassa (SaseLiberia) IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiFutuna (SaseMpuma) IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHmong (White) IsiHungary IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMalagasy IsiMapudungun IsiMbunda IsiMedumba IsiMizo IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNengone IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (SaseNorthern Greece) IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiRutoro IsiSarnami IsiSerbia IsiShona IsiShuar IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiWallisian
UThixo ufuna ukuba ube ngumhlobo wakhe. Ngaba wakha wayicinga into yokuba unako ukuba ngumhlobo woyena Mntu mkhulu kwindalo iphela? UAbraham owayephila kudala, wayebizwa ngokuba ngumhlobo kaThixo. (Yakobi 2:23) Nabanye ekuthethwa ngabo eBhayibhileni banandipha ubuhlobo noThixo yaye basikelelwa ngeyona ndlela. Namhlanje, abantu abaphuma kuzo zonk’ iinxalenye zomhlaba baye baba ngabahlobo bakaThixo. Nawe unako ukuba ngumhlobo kaThixo.
Ukuba ngumhlobo kaThixo kulunge ngaphezu kokuba ngumhlobo wakhe nawuphi na umntu. UThixo akaze abadanise abahlobo bakhe abanyanisekileyo. (INdumiso 18:25) Ukuba ngumhlobo kaThixo kulunge ngaphezu kokuba nobutyebi. Xa umntu osisityebi esifa, imali yakhe iya kwabanye. Noko ke, abo banandipha ubuhlobo noThixo banobutyebi ekungekho bani unokubohlutha.​—Mateyu 6:19.
Abanye abantu basenokuzama ukukuyekisa ukufunda ngoThixo. Kwanabanye kubahlobo nakwintsapho yakho banokwenjenjalo. (Mateyu 10:36, 37) Ukuba abanye bahlekisa ngawe okanye bakutyityimbisela umnwe, zibuze, ‘Ngubani endifuna ukumkholisa—ngabantu okanye nguThixo?’ Cinga ngoku: Ukuba ubani ebesithi yeka ukutya, ngaba ubuya kumthobela? Kakade ubungayi kukwenza oko! Kufuneka utye ukuze uphile. Kodwa uThixo unokukwenza uphile ngonaphakade! Ngoko ke ungaze uvumele nabani na ukuba akuyekise ukufunda ngendlela onokuba ngumhlobo kaThixo ngayo.​—Yohane 17:3.